बालकृष्ण ढुंगेललार्इ कहिलेसम्म हुन सक्छ जेल सजाय ? अभियोग यस्ताे छ - Everest Dainik - News from Nepal
बालकृष्ण ढुंगेललार्इ कहिलेसम्म हुन सक्छ जेल सजाय ? अभियोग यस्ताे छ
काठमाडौं, कात्तिक १५ । द्वन्द्वकालको हत्या मुद्दामा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल कारागार चलान भएका छन् । प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरी उनलाई कारागार चलान गरेको हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले भने चुनावको मुखमा नियोजित रूपमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । ढुंगेलको मुद्दा करिब एक दशकदेखि चर्चामा थियो ।
सातदोबाटोस्थित डेराबाट निस्किएलगत्तै पक्राउ
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ढुंगेललाई मंगलबार बिहान ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेको हो । डेराबाट निस्किएलगत्तै उनी पक्राउ परेका हुन् । ‘अदालतको पत्रअनुसार हामीले पक्राउ गरेका हौँ,’ सिआइबीका निर्देशक डिआइजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘अदालतले कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाएको छ ।’ ढुंगेललाई डिल्लीबजार कारागार (सदरखोर) पठाइएको छ ।
सुरुमा लछारे, पछि स्विकारे
अर्धभूमिगत रहेका ढुंगेलमाथि सिआइबीको टोलीले ६ दिनदेखि पिछा गरिरहेको थियो । उनी सातदोबाटोको अरुण टोल बस्ने पत्ता लगाए पनि प्रहरीले घर पत्ता लगाउन सकेको थिएन । मंगलबार बिहान पनि सिआइबीबाट खटिएको सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी टोली अरुण टोलमै थियो । बिहान करिब साढे १० बजे उनी छोरीसहित वकिललाई भेट्न निस्किए । सो क्रममा सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले उनलाई नमस्कार गर्दै आफूहरू सिआइबीबाट आएको भन्दै परिचयपत्र देखाए । प्रहरीले कार्यालयमा जान आग्रह गरे । प्रहरीले उनको हातमा समाइसकेका थिए । ढुंगेलले अस्वीकार गर्दै सुरुमा प्रहरीलाई लछारपछार गरे । त्यसपछि संयमित हुँदै सोधे, ‘जानैपर्ने हो त ?’
याे पनि पढ्नुस नेपालमा 'आचार्यकुलम' स्थापना गर्दै आचार्य बालकृष्ण
प्रहरीले कार्यालयमै गएर थप कुरा गर्न आग्रह गरेपछि प्रहरीको मोटरसाइकलमा चढेर उनलाई सातदोबाटो प्रहरी वृत्तनजिकै पुर्‍याइयो । उनले प्रहरीसँग झगडा गरेनन् बरु न्यायालय र सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । त्यहाँबाट प्रहरीले उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत पुर्‍यायो । अदालतको तहसिल शाखाले जिल्ला अदालत ओखलढुंगाबाट उनको फैसलाको विवरण मगाएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो ।
सुरुमा उनले आफूलाई नख्खु कारागार पठाउन आग्रह गरेका थिए । नियमित डायलासिस गर्दै आएको सुमेरु अस्पतालमा जान सहज हुने भएकाले नख्खु कारागार जान चाहेका थिए । तर, कैदीले कारण खुलाएर प्रतिवेदन पेस गरेमा मात्र त्यसरी अर्र्काे जिल्लाको अदालत पठाउन सकिने प्रावधान छ । उनले प्रतिवेदन दिन इच्छा नदेखाएपछि प्रहरीले उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगेको हो । करिब तीन घन्टा अदालतमा बसेका उनले त्यसक्रममा पनि आक्रोश पोखेका थिए ।
के थियो ढुंगेलमाथिको अभियोग ?
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय फैसला भएको थियो । १९ पुस ०६६ मा सर्वाेच्च अदालतले सो फैसला गरेको थियो । तर, द्वन्द्वकालको मुद्दामा आफूलाई फसाइएको भन्दै ढुंगेलले अदालतको फैसलालाई नमान्ने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका थिए । माओवादीले पनि सो मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, अदालतबाट टुंगो लागिसकेको मुद्दा आयोगमा नजाने भन्दै ढुंगेललाई पक्राउ गर्न श्रेष्ठका परिवार तथा अधिकारीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस चौकीदारका छोरा आचार्य बालकृष्ण कसरी भए भारतका ८ औं धनाढ्य
अदालतमा पटक–पटक रिटसमेत परेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गत साता प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध समेत अवहेलनाको रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सरकारबाट स्वीकृति लिएर ढुंगेललाई पक्राउ गरेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । माओवादी केन्द्रले घटनाको विरोध गरेको छ । ढुंगेललाई पक्राउ गराउन संघर्ष गर्दै आएकी उज्जनकी दिदी सावित्रीले भने बल्ल आफूहरूले न्यायको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
कहिलेसम्म हुन सक्छ सजाय ?
नेपालको हालको कानुनअनुसार अधिकतम २० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिहरू अधिकतम २० वर्षसम्म मात्र जेल बस्नुपर्छ । ढुंगेल सात वर्ष ६ महिना आठ दिन जेल बसिसकेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अब उनी १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल बस्ने जनाएको छ । अदालतले डिल्लीबजार कारागारलाई पठाएको कैदी म्यादमा उनी ६ वैशाख ०८७ मा छुट्ने उल्लेख छ । तर, कारागार ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार उनी आगामी जेठमा नै छुट्न सक्छन् ।
कारागार नियमावलीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चालचलन भएको कैदीलाई सरकारले कैद मिनाहा गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार कैद छुट पाएर गणतन्त्र दिवस र दसैंँको अवसरमा सरकारले कैदीहरूलाई छाड्ने गरेको छ । अबको पाँच महिना २२ दिनपछि उनको ४० प्रतिशत कैद भुक्तान हुन्छ । कारागार नियमावली २०२० अनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चालचलन भएको कैदीलाई बाँकी ६० प्रतिकत कैद सजाय भुक्तान हुन प्रावधान रहेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले बताए । सोही प्रावधानअनुसार आगामी जेठमा उनी छुट्ने सम्भावना छ।
कारागार प्रशासनले नियमावली उल्लेख भएका केही मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा कैदीलाई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएको भन्दै छाड्दै आएको छ । सोही कारण ढुंगेल पनि जेठमा छुट्न सक्ने भएकाले आत्मसमर्पण गर्नेबारे छलफलमा थिए । वकिललाई भेट्न जाने वेलामै उनी पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ गर्नु विस्तृत सम्झौताविपरीत
प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ गर्नु विस्तृत शान्ति–सम्झौताविपरीत भएको बताएकी छिन् । ‘तत्कालीन माओवादी र सरकार पक्षबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता हुँदा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्ट्याउने सम्झौता भएको थियो,’ भुसालले भनिन्, ‘विस्तृत शान्ति–सम्झौताविपरीत ढुंगेललाई जेल चलान गर्नु गलत छ ।’ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिरहेको अवस्थामा ढुंगेललाई पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक भएको भुसालले बताइन् । सरकारले निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रका साथ ढुंगेल पक्राउ गरेको भन्दै उनले तत्काल रिहा गर्न माग गरिन् ।
ट्याग्स: Acharya Balkrishna